ZPW-gazety takelaka 25b mametraka milina fanaovana mampahatsiro sakafo ho an'ny cubes - China Sino Laza
cubes fikarakarana milina
vatomamy vala wrapping milina
cubes takelaka maika milina
vovoka fampifangaroana milina
mampahatsiro sakafo goba vala wrapping milina
goba pamokarana ronono
sôkôla tsiro pamokarana ronono goba
tsara tsiro pamokarana ronono goba
Lavanila tsiro pamokarana ronono goba
mampahatsiro sakafo goba pamokarana
10g mampahatsiro sakafo goba pamokarana
4G mampahatsiro sakafo goba pamokarana
10g akoho Bouillon goba pamokarana
Miverena tetikasa manan-danja Bouillon goba pamokarana
4G hen'omby Bouillon goba pamokarana
4G mampahatsiro sakafo goba vala wrapping milina
ZGH-350 Mixer milina haingam-pandeha
10g aforeto fanehoany milina amin'ny nandamina fitaovana
ZPW-gazety takelaka 25b mametraka milina noho ny fanaovana seasoni ...
vatomamy lafiny goba famehezana vala wrapping milina
ZPW-gazety takelaka 25b mametraka milina fanaovana mampahatsiro sakafo ho an'ny cubes
Asa: vatomamy goba vala wrapping milina
Daty fanaterana: 35 andro fiasana
Condition: Vaovao Place ny Origin: Shanghai, Shina (Tanibe) Brand Name: ZMD
Type: Rotary Tablet Press Zintin'aratra 220V / 380V Certification: ISO9001
Material: Inôksa lafiny: 920 * 890 * 1540 MG
Rehefa-varotra Service toa ka: Injeniera misy ny fanompoana
maty 19 Sets
Max. Savaivony ny Table 40mm
Max. Halalin'ny mamenoa 25mm
Max.Thickness ny Table 12m
ny fahafaha-mamokatra 20520pc / h
Motor fahefana 3kw
Endri-javatra ny fitaovana
1.Easy hametraka, fampiasana, ka omeo.
Ny milina vatana ara-nofo dia Stainless vy-penitra.
Ny fampiasana milina kiboriny fanaraha-maso izay mahatonga ny milina esay ampiasaina sy ny asa famonjena.
2.Automatically hanodinana ny fomba.
Ny hafainganam-pandeha ny turntable, ny halalin'ny famenoana ara-nofo sy ny hatevin'ny ny vato fisaka dia azo ahitsy. Ny fahafahana dia azo ahitsy araka ny sitraponao aho.
3.Excellent fampisehoana, avo fahombiazana ny lehibe pamokarana.
Ny Max fahafahana io milina mety ho 54000pcs / h, izay midika hoe afaka sitrana ny vola lany amin'ny fotoana fohy ka hahazo tombony ho ela.
4.Large fanerena sy avo marina tsara.
Fanerena lehibe indrindra hatramin'ny 100kn, savaivony ny takelaka lehibe indrindra hatramin'ny 40mm, izany hoe ny Bouillon cubes na cubes hafa atao amin'ny mpanao gazety ny takelaka milina dia amin'ny toetra lehibe. Ho vokany, dia afaka hahazo ny fanao ny fitiavana sy hanitatra tsena haingana indrindra.
5.No loto, ny fako ny manta tsy misy fitaovana.
Ny milina dia azo mifanentana amin'ny vovoka mitroka boaty, izay afaka mitroka ny vovoka niteraka ny milina, avy eo ny vovoka azo amboarina.
Endri-javatra ny fanompoana
1) Afaka manome tolotra ho an'ny fametrahana rehetra, naniraka sy ny fampiofanana.
2) Afaka manome ny famokarana teknolojia ho an'ny mpanjifa, toy ny raikipohy
3) taona iray Warranty
Bouillon goba takelaka gazety milina Aostralia faritra
Name : Gravity feeder amin'ny Hopper
Material : Stainless vy
Features : famolavolana manokana ho an'ny vovoka foana hirotsaka ho any an-ho faty. Azo nampiarahina amin'ny turret maotera fampisehoana ho tsara kokoa. Material mikoriana fehezin'ny Rotary miditra tsimoramora.
Material : Stainless vy 304
Features: Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny turntable dia nanitsy ny VF toerana amin'ny alalan'ny mbamin'ny kiboriny amin'ny herinaratra tontonana. Hateviny tsindry sy ny fanerena ny asa dia azo ahitsy 'ny tanan kodiarana voalaza tari-dalana.
• Standard Export Wooden Case fonosana
2.How no tokony ho azo antoka momba ny milina tsara rehefa manao loha laharana ny baiko?
3.We matahotra dia tsy mandefa antsika ny milina rehefa handefa anareo izahay ny vola?
4. Nahoana isika no tokony hifidy ny orinasa?
satria isika no tsara indrindra any an-tsaha io, ary izahay kosa dia manana ny ny orinasa eo amin'ny producting Bouillon cubes, dia afaka manome anao ny tsara indrindra ny teknolojia fanampiana
5.Need antsipirihany milina hafa, na horonan-tsary?
dia mifandraisa aminay mivantana
Previous: ZPW-gazety takelaka 23b mametraka milina fanaovana mampahatsiro sakafo ho an'ny cubes
Manaraka: 4G aforeto fanehoany milina amin'ny nandamina fitaovana
Automatic Powder Cube ny Fandrosoana Machine
ron-kena Cube Press Machine
Cubes Tablet ny Fandrosoana Machine
Full Automatic Spice fonosana Machine
Tongolo Spice Cube Machine
Fonosana Machine Fa Spice
Press Cube wrapping Machine
Rotary Tablet Press Ny fanaovana Machine
Zava-manitra Cube Aforeto wrapping Machine
Zava-manitra Cube Making Machine
Zava-manitra Cube fonosana Machine
Spice Cube Production-dalana,
Spice Stock Processing-dalana,
Spice Stock Production-dalana,
Zava-manitra fonosana Machine
Tablet nofonosiny fonosana Machine
Tablet fiforonana milina
Tablet fonosana milina
Tablet Press Machine Aostralia
Tablet Press Machine Shina
Tablet Press Machine Boky Torolàlana
Goba indray Candy famehezana vala wrapping milina
ZPW-gazety takelaka 23b mametraka milina fanaovana se ...
Side famehezana vala wrapping milina amin'ny arrangi ...
Goba mampahatsiro sakafo indray famehezana vala wrapping milina
More vokatry ny Food Processing milina
Sino Laza Group